€ 303 Maka FIMI X8 SE FPV Otu | CouponBG.com
Home » Kupọns na-emekọ » [EU ngwaahịa - CZ] FIMI X8 SE FPV Otu Batrị Version
Kacha mma ọnụahịa
[EU ngwaahịa - CZ] FIMI X8 SE FPV Otu Batrị Version
Okwu Mmalite Ọ bụ eziokwu na ị na-achọ ezigbo mmiri ọgwụ maka foto, nke na-eso igwefoto 4K na nnukwu otu ihe ngosi dị jụụ ma ọ gaghị efu $ 1000? Xiaomi Fimi X8 SE nwere ike ịbụ mmiri na-achọ.
Anyị n'ozuzu anyị maara na DJI na-eduga ahịa ndị ahịa na-egbu mmiri, ọkachasị n'elu ahịa foto foto na usoro ha nke Phantom na Mavic nke drones. Ka o sina dị, na ohere ị nweghị ike ego maka elu nke akara DJI drone, enwere nhọrọ ndị ọzọ dị egwu na Xiaomi FIMI X8 SE drone so na ndepụta ahụ.
Ihe a Nhazi nke FIMI X8 SE drone bu ihe puru iche nke na - adi ka ihe di nma nke na - ezute olile anya. Ngwurugwu a na-adọkpụ na-agụnye usoro dị iche iche na-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche. Ejiri aka ya rụọ ogwe aka anọ nke na-eme ka mmiri dị ntakịrị ma bulie ogologo oge iji bulie ike ya. Nku ahụ na-enye ụtụ maka ọdịdị nke mmiri mmiri, na ihe pụrụ iche nke bụ ihe mmeghari ohuru. N'oge a mgbe drone dara, ọ dịtụ ntakịrị karịa ekwentị mkpanaaka. Nke a bụ usoro dị egwu na ergonomic maka ndị njem. Ọzọkwa, onye na-ahụ maka ime ihe dị ka PSP. Ọ pụta ìhè na mpi abụọ dị na njedebe. Na isi aka ekpe, ị nwere ike ịchọpụta bọtịnụ ike zoro ezo na sliver. N'ime ike button bụ ebe Njikọta slide mgba ọkụ na nsogbu na. A na-akpọkarị ya dị ka egwuregwu / ọnọdụ GPS. N'okpuru bọtịnụ ike bụ Smart Laghachi na bọtịnụ ụlọ. Karịsịa, gadget na-enye ọkachamara ọkachamara na-eme ka ịchọọ inwe ya n’echeghị banyere atụmatụ ya.
Camera Obi abụọ adịghị ya, isi ihe dị na mmiri a bụ igwefoto 4K dị ebube, ọ bụ ezigbo ngwaike nke ga-enye gị ohere ịhụ ụwa si n'elu na HD zuru oke. Nke a bụ ihe kpatara m ji nwee ịhụnanya drones, ị ga-enwe ohere ilegharị anya n'ụwa niile nke na ị gaghị enwe ike ịnwe nhọrọ na FIMI X8 SE ị nweta ihe ùgwù ile ya anya n'ụzọ zuru oke HD. Igwefoto 4K na-enweta nkwụsi ike site na 3-axis mechanical gimbal nke ga-ehichapụ ụdị ntụgharị ọ bụla na-enye gị foto dị mma na ndekọ na ọnọdụ ikuku. Iji igwefoto 4K, ị nwere ike ịdekọ na 30FPS ma bido nyefe vidiyo ozugbo na ekwentị gị ebe ị ga-enwe nhọrọ ịgbanwe ma kekọrịta ihe ndekọ gị site na ntanetị n'ịntanetị. Igwefoto na-esonyere ihe mmetụta Sony ½.3 nke anụ ọhịa nke sonyere HDR nke ga-ewepụta nkọwa onyonyo ndị ọzọ ama ama ma nye gị ezigbo ndozi ojiji. Igwefoto dị mma maka ịse foto ikuku na 12MP, nkọwa nke igwefoto naanị kwesịrị ụgwọ nke drone.
Njikwa Remote Achọrọ m ịkọwa onye na-ahụ maka njikwa dị n'etiti ndị ọzọ m hụtụrụla, a na-ewu ya nke ọma ma na-enwe ọfụma n'aka gị. Njikwa niile bụ ihe ọ bụla siri ike iru, ọ nwere nnukwu nnyefe ntinye gburugburu 5km, nke a bụ ọkwa pụtara ama karịa ma Parrot Anafi na Mavic Pro. Enwere njikwa maka ọdịda, iwepụ, na-ese foto na vidiyo na ọkpụkpọ ga-eme ka ị hazie gimbal.
Atụmatụ ndị ọzọ Mmiri ahụ na-eso batrị lipo mara mma nke na-enye gadget oge ụgbọ elu nke ihe dị ka nkeji 30. Nke a dakọtara na Air na DJI Mavic. Ngwa FIMI Navi nwere ike ịnwe ma iOS na gam akporo gadgets, ọ nwere ihe dị mfe iji wee nwee mmụọ ebumpụta ụwa na ọ bụ ngwa ahụ na-enye gị nnabata nke imirikiti ihe ịtụnanya magburu onwe ya nke gadget na-eso.
mmechi Xiaomi FIMI X8 SE bu ihe ojoo di egwu nke gha enyere gi aka iwere otutu ihe na ihe osise ya na igwefoto 4K ya. Ọ bụ ezigbo nhọrọ dị iche na ndị na-akwụ ụgwọ ya na ị na-enweta isi ihe yiri ya. Site na mmelite ụgbọ elu ya ka mma ma dị mfe iji njikwa na ngwa, automaton kwesịrị ekwesị maka ndị ọkwọ ụgbọ ala nwere ahụmahụ na ndị na-enweghị uche. Banggood.com bụ ebe kachasị mma iji zụta ụgbọ mmiri a na ọnụego kacha mma.
Naanị 303 8 maka FIMI X2020 SE 8 3KM FPV Na 4-axis Gimbal 35K Igwefoto HDR Video GPS XNUMXmins Flight Time RC Quadcopter RTF Otu Battery Version - White No FIMI Premium Care
Maka onyinye FIMI ndị ọzọ hụ - EBE A
Kupọns a dị irè naanị maka EUROPE - CZ nkwakọba! Xtụ ụtụ na ngwa ngwa mbupu si Europe! Knowmatakwu banyere Banggood Arelọ nkwakọba na Omenala ụtụ isi ị nwere ike ịgụ EBE A
item Versiondị 2020 Versiondị 2018
akụkụ: 204 x 106 x 72.6mm
Ọdịdị diagonal: 372mm
Ihe dị mkpa: 765g
Hover ziri ezi Vetikal: ± 0.1m (N'ime ihe nchọpụta ultrasonic) ± 5m (mgbe ọnọdụ GPS nọ n'ọrụ)
Hover ziri ezi Kwụ: ± 1.5m
Max arịgo ọsọ: 5m / s
Max agbadata ọsọ: 4m / s
Max cruising ọsọ: 18m / s
Elu elu elu: 500m
Oge ụgbọ elu kachasị elu (enweghị ifufe): Banyere 35mins (na 8m / s na-agba ọsọ) Oge nkwụ ụgwọ: 3.5h
Ifufe ikuku: ≤50kph
Usoro nhazi satịlaịtị: GPS + GLONASS + BEIDUO
Oge ọrụ: 5.725-5.850 GHz
Ngwugwu ibu: banyere 1.97KG
Ngwugwu Size: 287 x 247 x 96mm
Ihe dị mkpa: 790g
Oge ụgbọ elu kachasị elu (enweghị ifufe): Banyere 33mins (na 8m / s na-agba ọsọ) Oge nkwụ ụgwọ: 3.5h
Usoro nhazi satịlaịtị: GPS + GLONASS
Njikwa ihe ntanetị
Akụkụ: 203.8 × 91 x 46.6mm
Oge ọrụ: 5.725-5.850GHZ
Ogologo njikwa kacha achịkwa: Ihe dị ka 8000m
Batrị: Batrị lithium 3900mAh
Ngwakọta elu elu: 3.7V
Portdị ọdụ ụgbọ mmiri dị ka: Micro USB
Ntinye: 5V -2A Modekpụrụ: Ọnọdụ 2 ( aka ekpe trotul)
Max akara anya: Ihe dị ka 5000m
Ntinye: 5V -2A Ọnọdụ: Ọnọdụ 2 ( aka ekpe trotul)
Na-achịkwa adiana akporo: 0 ° 〜-90 Celsius Pitch angle
Angle akara ziri ezi: ± 0.004 Celsius
Kwụsị: 3 gimbal axis
HD 4K Igwefoto
Mgbanwe: FOV 80 Celsius
Ebe dị anya: 3.54mm
Ẹkot nsịn ke ekikere: 26mm
mmetụta: 1 / 2.6 ″ CMOS
Pikselụ dị irè: 12M
Ohere ISO: 100 - 3200 maka vidiyo 100-1600 maka ka dị
Ọsọ ọsọ: 32 ~ 1 / 8000S
Ntinye vidiyo: 4K UHD: 3840×2160 30/25/24fps
Usoro faịlụ: FAT32 / exFAT
Ọdịdị foto: JPG; JPG + DNG
Ụdị vidiyo: MP4
Ụdị kaadị nchekwa: Micro SD (U3 ma ọ bụ karịa) 8 - 256GB (Sandisk / Kingston U3 kwadoro)
Anya: FOV 78.8 Celsius
Ebe dị anya: 4.73mm
Ọdịdị anya dị anya: 26mm
Ihe mmetụta: 1/2.3 ″ CMOS
Ihe arụ ọrụ bara uru: 12M
Ọnọdụ ISO: 100 - 3200 maka vidiyo 100-1600 maka ka dị
Shutter ọsọ: 8 ~ 1 / 8000S
Max mkpebi mkpebi: 4000 * 3000
Mkpebi vidiyo: 3840 × 2160 30/25 / 24fps
Nhazi ihe onyonyo: JPG; JPG + DNG
Carddị kaadị ebe nchekwa: Micro SD (U3 ma ọ bụ karịa) 8 - 64GB (Sandisk / Kingston U3 kwadoro)
Mmepụta ọnụego :13.05V -3A
Gosiri ike: 39.15W
Ntinye ederede: 100-240V~50/60Hz1.5A
Nchaji ikike voltaji: 13.05V-3A
ikike: 4500mAh / 51.3Wh
arọ: banyere 270g
Nchekwa ọrụ: 0-40 ℃
Elu elu kwesịrị ekwesị: ≤5000m
Mmejuputa iwu ụkpụrụ: Q / BJFMK0001-2016
[Ngwa EU - ES] Onda Xiaoma 31 Intel N3450 13.3 inch Quad Core 1.10GHz 4GB DDR3 64GB eMMC Intel HD Graphics 500 Win 10 Home Laptop HDMI Full Metal Golden Luxury Notebook 500 IPS Screen.
[EU ngwaahịa - CZ] T10 2000W Dual Motor 23.4Ah 10 Inches E-Skuuta na oche
Tags: [EU ngwaahịa]FIMIRCSEX8X8SEXiaomi
Xiaomi RedmiBook Pro 14 2021 Laptop 14.0 inch 2.5K High-Resolution 100%sRGB AMD Ryzen R7-5700U 16G DDR4 3200MHz RAM 512G SSD 300nits Ụdị-C Backlit Fingerprint Camera WiFi 6 Notebook
Jiri Usoro Usoro Usoro:BG7c12ce
AtuMan DUKA LI1 2 Na 1 Dual Laser Protractor Digital Level Ruler Rechargeable 360 ​​° Measurement Angle Cast Angle Measurement.
Jiri Usoro Usoro Usoro:BG67a1ab
Aqara ZigBee Wireless Human Body PIR Sensor Smart Home Kit Kit na -arụ ọrụ na APP Gateway - 1 PC
Jiri Usoro Usoro Usoro:BGAQIRHK
XCY X30 Mini PC Computer Intel Celeron N2955 Barebone Quad Core Win 10 Desktọpụ Office HTPC VGA HDMI WIFI Gigabit LAN 5xUSB
SG 1401 1402 RTR 1/14 2.4G 4WD Full Proportional Front LED Light RC Car Climbing Off-Road Truck-SG-1402
Jiri Usoro Usoro Usoro:BGSG14RC